Shiinaha Mashiinka Burushka Multi-function Mashiinka BD1A warshad iyo soo saarayaasha | Jinqiu
Waxay u adeegsan kartaa nadiifinta roogga, nadiifinta dhulka, soo saaridda wax-soosaarka iyo nadiifinta xawaaraha hooseeya.
Shayga No BD1A BD2A BD3A
Danab 220 / 50Hz 220 / 50Hz 220 / 50Hz
Awood 1100W 1100W 1100W
Xilligan 6.92A 6.92A 6.92A
Caday xawaaraha wareega 154rbarka 154rbarka 154rbarka
Buuq D54dB D54dB D54dB
Dhexroor cadayo 17 ” 17 ” 17 ”
Miisaanka 49.66kg 48.36kg 49.66kg
Dhererka fiilada 12m 12m 12m
Xirxirida 4CTN / Cutub 4CTN / Cutub 4CTN / Cutub
Midab Buluug, casaan, jaalle Buluug, casaan, jaalle Buluug, casaan, jaalle
Mashiinka cadayashada waa mashiin lagama maarmaan u ah inuu cadayo sagxada adag, waa mashiin xawaare hooseeya (154 rpm), marka dabaqaagu leeyahay wasakh dhulka ku jirta oo aad u baahan tahay inaad xoogaa muruq ah xoqdo, si fiican u isticmaal xoogaa xalka nadiifinta, burushka u sii wad nadiifi sagxaddaada. Mashiinka burushka badan ee shaqeynaya ayaa fududahay in la shaqeeyo, badbaado iyo saameyn nadiifin fiican. Waxay si gaar ah ugu habboon tahay nadiifinta roogga, dabaqa, nadiifinta xawaaraha hoose ee noocyada kala duwan ee dabaqa iyo dib u habeynta dusha sare ee hoteelada, makhaayadaha, dhismooyinka xafiisyada iyo hoolalka bandhigga.
Halkan waxaa ku yaal xeelad yar oo loo isticmaalo gubista si loo badbaadiyo dadaalka. Caadi ahaan, waxaan isticmaalnaa labada gacmood si aan gacanta ugu qabanno hoos. Habka ugu saxsan uguna shaqada badan badbaadinta waa inuu noqdaa in gacan qabashada sida caadiga ah gacanta bidix hoos loo dhigo, gacanta midigna lagu hago xakamaynta jihada ka soo horjeedka hoose ilaa kor, ka dibna la hagaajiyo xarkaha booska dhexda. Markaad sameysid xoog, inta badan isticmaal dhexda si aad ucaawiso, adigoo gacanta bidix horay usii riixaya, iyo gacanta midig oo madow jiidaya, taas oo badbaadin karta dadaal dheeri ah.
Waxaan haynaa mashiin dabaq ah oo taxane ah si aan ula kulanno baahiyahaaga. Sida cabbirka 13 ", 17" iyo 18 ", xawaaruhu wuxuu leeyahay 154rpm 175rpm, nooc kala duwan oo aad dooratay.
Hore: Mashiinka dabaqa-Multi-functional-SC002
Xiga: Multi-function Mashiinka cadayashada BD2A
20L / 32L / 45L Nadiif Vacuum Nadiifi YJ1020 1032 ...